3 Fitamiin Oo Kaa Ilaalineysa Feyruska “Karoona” | Xaqiiqonews
3 Fitamiin Oo Kaa Ilaalineysa Feyruska “Karoona”
Barafasoor Sptawati Pardasona oo ka tirsan kuliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Indonesia ayaa sheegay in caruurta iyo dadka difaaca liita ay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee uu ku dhici karo fayruska “karoona”.
Sida laga soo xigtay barfasoorka, waxaa jira seddex fitamiin oo muhiim u ah difaaca jirka kuwaasi oo kala ah “vitamin A” , vitamin c iyo waliba Vitamin D.
Barfasoorka ayaa sheegay in fitamiinada halkani ku xusan ay muhiim aad u yihiin ka hortagga cudurka Karoona, madaama ay xoojinayaan difaaca jirka gaar ahaan caruurta.
Sptawati ayaa sheegay in Vitamin A laga heli karo cuntooyinka iyo khudaarta ay ka mid yihiin malaayga, caanaha ukunta, karootada, bataatiga macaan iyo kuwa kale.
Sidoo Kale Aqri Bukaan Qaba Karoona Feyrus Oo Aargudasho Darteed Dad qaadsiiyey
Dhanka kale vitamin C, waxa uu ka mid yahay difaacayaasha jirkeena ee aadka ula dagaalama sunta jirka, cuntooyinka laga heli karana waxaa ka mid ah canbaha, saytuunka, liin banbeelmada, liin dhanaanta iwm.
Vitamin D isna waxa uu ka mid yahay difaacayaasha jirka, meelaha ugu badan ee fitamiinkan laga helo waxaa ka mid ah qoraxda, kalluunka iwm.
Barfasoorka ayaa sheegay in isku dheeli tirnaanta cuntada ay ka qeyb qaadan karto in caruurta laga ilaaliyo qataraha deegaanka, waxa kale uu dhaqtarka ku taliyey in gacmaha saabuun lagu dhaqo isticmaalka musqusha ka dib.